July 2021 - News 88 Post
देउवा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै धरौटीमा छुटे गच्छदार, भट्टामा मान्छे पो’ल्ने आलम कहिले छुट्दैछन् ?
July 14, 2021 N88LeaveaComment on देउवा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै धरौटीमा छुटे गच्छदार, भट्टामा मान्छे पो’ल्ने आलम कहिले छुट्दैछन् ?
काठमाडाैं । विशेष अदालतको फ’रार सूचीमा रहेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार काँग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै बुधबार बिहानै विशेष अदालतमा हाजिर भएर बयान दिएका हुन् । उनले बिहान १० बजे विशेष अदालतमा हाजिर भएर बयान दिएका थिए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग विशेष अदालतले २०५९ को ऐनको दफा ७ (घ) बमोजिम १० लाख […]
खुशीकाे खबर : पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
July 14, 2021 N88LeaveaComment on खुशीकाे खबर : पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोल तथा डिजेल/मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १ रुपैयाँ घटाएको हो । बुधबार निगमले काठमाडौँ (निगमको डिपो क्षेत्रको १५ कि.मि. परिसर भित्र)का लागि नयाँ खुद्रा मूल्य क्रमशः रू. १२८ तथा रू. १११ प्रति लिटर कायम गरिएको छ । केही दिनअघि मात्र भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य […]
साउन १ गतेदेखि लामाे दुरीका गाडी चल्ने यस्ता छन् सर्त
July 14, 2021 N88LeaveaComment on साउन १ गतेदेखि लामाे दुरीका गाडी चल्ने यस्ता छन् सर्त
काठमाडौं । साउन एक गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात जोरबिजोर प्रणालीमा चलाउन दिने तयारी भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रजिअ ढुण्डीप्रसाद निरौलाले लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीलाई जोर बिजोर प्रणालीमा चलाउन दिने तयारी भएको बताउनुभयो । भोलि बस्ने उपत्यकाका प्रजिअहरुको बैठकले यस विषयमा निर्णय लिने बताउनुभयो । साथै बैठकमा कोरोनाको पछिल्लो अवस्था बारे पनि […]
धनी बन्ने गुणले भरिपूर्ण हुन्छन् यी ४ राशि
July 14, 2021 N88LeaveaComment on धनी बन्ने गुणले भरिपूर्ण हुन्छन् यी ४ राशि
काठमाडौँ । धनी बन्ने चाहना त कसका हुँदैन र सबैको हुन्छ । भनिन्छ धन भनेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र खुल्छन् । मनग्य धन आर्जन गरेर रइस जीवन जीउने मन सबैको हुन्छ । त्यसो त कति धन कमाउने भन्ने कुरा कर्मको फल पनि हो ब्यक्तिले धन कमाउनको लागि के काम गर्छ त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा […]
नारायणगढ–मुग्लिन सडक घामपानी दुबैमा जोखिम
July 14, 2021 N88LeaveaComment on नारायणगढ–मुग्लिन सडक घामपानी दुबैमा जोखिम
चितवन । पहिराले खाल्डै खाल्डा बनाएको नारायणगढ–मुग्लिन सडकको स्तरोन्नतिसँगै धेरैले सहज यात्राको अपेक्षा गरेका थिए । यो लामो समय बित्न नपाउँदै सडक ठाउँठाउँमा भत्किएका छन् भने पहिरो रोक्नका लागि गरिएको प्रयास सफल हुनसकेको छैन । धेरै ठाउँ सुरक्षित भए पनि पछिल्ला वर्षमा नयाँ ठाउँमा पहिरो खस्न थालेपछि यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । यसवर्ष सो सडकका […]
लोकसेवा आयोगले प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षण कसरी गर्दछ ?
July 14, 2021 N88LeaveaComment on लोकसेवा आयोगले प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षण कसरी गर्दछ ?
हेमचन्द्र शर्मा / रीता पाेखरेल लोकसेवा आयोग एक स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिका निकाय हो । यसले निजामती सेवाका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त कर्मचारी छनोट गरी रिक्त पदको माग संकलन गर्ने , विज्ञापन गर्ने, दरखास्त संकलन गर्ने, छानविन गर्ने, परीक्षा लिने, नतिजा प्रकाशन गर्ने ,अन्तवार्ता लिने, सिफारिश गर्ने जस्ता कर्य गर्दछ । लोकसेवा आयोगले यी कार्य […]
देउवा अझै दुई पटक प्रधानमन्त्री हुन बाँकी
July 14, 2021 N88LeaveaComment on देउवा अझै दुई पटक प्रधानमन्त्री हुन बाँकी
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पुर्पुरोमा लेखिएकै हो भने उनी अझै दुइपटक प्रधानमन्त्री हुनेछन् । भानुजयन्तिका दिन उनी पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसपटक देउवाको भाग्यको ढोका सर्बोच्च अदातलको संवैधानिक इजलाशबाट खुलेको छ । अरु दुइ पटक कसरी उनी प्रधानमन्त्री बन्ने छन् त्यो छैठीमा भाग्य लेख्ने विधातालाई मात्र थाहा छ । […]
विवाहमा प्रहरी हस्तक्षेप, वेहुली छोडेर वेहुलोसहित जन्ती फिर्ता
July 14, 2021 N88LeaveaComment on विवाहमा प्रहरी हस्तक्षेप, वेहुली छोडेर वेहुलोसहित जन्ती फिर्ता
एजेन्सी । भारतको उत्तराखण्डस्थित उधमसिंह नगर, काँशीपुरमा विवाह गर्न वेहुलो लिएर आएका जन्तीलाई प्रहरीले उल्टो पाउ फिर्ता पठाएपछि हंगामा सुरु भएको छ। वेहुलीको घरमा धार्मीक परम्परा अनुसार विवाहको तयारी सुरु भएपछि एक महिलाले विवाद सुरु गरेपछि विवाह रोकिएको हो । ति महिलाले वेहुलो वनेका युवकको पहिलो पत्नी आफु भएको र वहु विवाह हुन लागेको दावी […]
नागरिकलाई देउवा सरकारको सरप्राइज उपहार सवारी भाडा २८ प्रतिशत बढ्यो
July 14, 2021 N88LeaveaComment on नागरिकलाई देउवा सरकारको सरप्राइज उपहार सवारी भाडा २८ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडाैँ । सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै यातायातका साधनमा लाग्ने भाडा वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो सरकारको थाप्लोमा दोष हाल्न सजिलो हुने भन्दै रातारात सार्वजनिक यातायातको भाडादर […]
बालुवाटार काण्डका अभियुक्त गच्छदार धरौटीमा रिहा
July 14, 2021 N88LeaveaComment on बालुवाटार काण्डका अभियुक्त गच्छदार धरौटीमा रिहा
काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना काण्डका अभियुक्ति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ । मुद्दा दायर भएको करिब डेढ वर्षपछि गच्छदार अदालतमा हाजिर भएका गच्छदारलाई एकै दिनमा बयान र थुनछेक बहस सकेर विशेष अदालतले घर पठाइदिएको हो । यस प्रकरणका सबैजसो अभियुक्त […]